တစ်ဦးစံစမ်းသပ်မှုအပေါ်စာရေးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက် Find လုပ်နည်း
အာဘော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် Find လုပ်နည်း
သိမှတ်ကြလော့ ဘယ်အရာကိုစာရေးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မေးခွန်းများကိုတူအောင် တဦးတည်းအရာဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်ရှာဖွေခြင်းအတော်လေးအခြားပါ! တစ်ဦးတွင် စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ် , သင်ကထွက်တွက်ဆကူညီရန်အဖြေရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ distractor မေးခွန်းများကိုမကြာခဏသင်ကရောထွေးပါလိမ့်မယ်။ တိုတောင်းတဲ့အဖြေကိုစမ်းသပ်မှုတွင်, သင်ကထွက်တွက်ဆဖို့ဘာမျှပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ရှိသည်လိမ့်မယ်, တခါတလေအဲဒါကိုပုံရသည်မှာအဖြစ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
စာရေးဆရာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကျမ်းပိုဒ်ရေးသားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာဖွေကျမ်းပိုဒ်အတွင်းပိုင်းသဲလွန်စမှာရှာဖွေနေသကဲ့သို့လွယ်ကူသော (သို့မဟုတ်အဖြစ်ခက်ခဲ) ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါ "ဟုအဆိုပါစာရေးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ" ဆောင်းပါးထဲမှာစာရေးဆရာတစ်ဦးစာသားပိုဒ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အားအကြောင်းရင်းများကိုဆိုလိုတာရေးသားဖို့ရှိသည်မယ်လို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းရင်းများဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူဆက်စပ်သဲလွန်စစကားများအားဖြင့်ထိုအကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သဲလွန်စစကား: နှစ်ဦးစလုံး, အလားတူ, တူညီတဲ့လမ်းအတွက်ပဲအဖြစ်ကဲ့သို့
dissimilarly သို့သော်ပေမယ့်, အခြားတစ်ဖက်တွင်: သဲလွန်စစကား
သဲလွန်စစကား: စာရေးဆရာရဲ့အနုတ်လက္ခဏာသဘောကိုပြစကားလုံးတွေကိုရှာဖွေပါ။ တရားသဖြင့်စီရင် "မကောင်းတဲ့" ကဲ့သို့စကားလုံးများ, "ဖြုန်းတီး" နှင့် "ဆင်းရဲသားကို" လူအပေါင်းတို့သည်အနုတ်လက္ခဏာထင်မြင်ယူဆဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဥပမာပေးပါ / ဖော်ပြပါ: စာရေးသူအနေနဲ့စိတ်ကူး၏ရုပ်ပုံပန်းချီချင်ခဲ့တယ်
သဲလွန်စစကား: ဖော်ပြရန်အသေးစိတ်များကိုစကားလုံးများကိုရှာဖွေပါ။ "အနီရောင်" "lusty", "morose", "အစင်း", "ဆင်းအရောင်" နှင့် "crestfallen" ကဲ့သို့ adjective နာမဝိသေသနအားလုံးဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။
သဲလွန်စစကား: ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားသို့ရှုပ်ထွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှန်သောဤစကားသည်ကိုကြည့်ပါ။ တစ်ဦးက "ဖော်ပြရန်" စာသားကိုပိုပြီး adjective နာမဝိသေသနကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ an "ရှင်းလင်း" စာသားကိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးစိတ်ကူးနှင့်အတူအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ဖော်ထုတ်ရန် / စာရင်း: အာဘော်စိတ်ကူးများ၏အယူအဆတခုသို့မဟုတ်စီးရီးအကြောင်းကိုစာဖတ်သူကိုပြောပြချင်ခဲ့တယ်
သဲလွန်စစကား: ဖျောသို့မဟုတ်စာရင်းကြောင်းစာသား, အများကြီးဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကူးများ၏အယူအဆတခုသို့မဟုတ်စီးရီးအမည်ပါလိမ့်မယ်။
အရှိန်အဟုန်မြင့်: စာရေးသူအနေနဲ့စိတ်ကူး သာ. ကြီးမြတ်ပါစေခငျြတ
သဲလွန်စစကား: ပိုမိုမြှင်စိတ်ကူးပိုမိုတိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ add လိမ့်မည်ဟုစာသား။ နှိုငျးမဲ့ adjective နာမဝိသေသနနှင့် "ပိုကြီး" သဘောတရားများကိုရှာဖွေပါ။ ဝမ်းနည်းစွာငိုတစ်ဦးကကလေးငယ်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ mournfully မိနစ် 30 အနီရောင်-cheeked မြည်နေတဲ့ကလေးကပိုပြင်းထန်သောဖြစ်ပါတယ်။
သဲလွန်စစကား: အဖြေတွေကိုများသောအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ထင်မြင်ချက်များဖြစ်ကြပြီးယုံကြည်ဖို့စာဖတ်သူယိမ်းဖို့ကြိုးစား "အကြံပြုရန်" ။ ရေးသားသူကသက်သေပြဖို့အသေးစိတျကိုအသုံးပြီးတော့တစ်ဦးပွိုင့်ပေးလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်ဖတ်နေတဲ့အခါသင်ရေးသားသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာမသေချာသေးလျှင်သင်၏လက်၌အခဲတံသုံးစွဲဖို့ကူညီပေးသည်။ သင်ဖတ်အဖြစ်, သင်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရကူညီပေးရန်စာသားအတွက်သဲလွန်စစကားလုံးများကိုထင်ရှားစေပါသည်။ ထို့နောက်ရေးသားသူအတွက်အပိုင်းအစရေးသားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပေးသောရွေးချယ်မှုကနေအကောင်းဆုံးအဖြေကိုရွေးချယ်ပါအဘယ်ကြောင့်ပြသနိုင်ဖို့သော့ချက်စကားများ (ဥပမာပေးရ, ရှင်းပြ, နှိုင်းယှဉ်) သုံးပြီးဝါကျ compose ဖြစ်စေ။
လကျတငျ Root "လူနာတင်ကား" နားလည်ခြင်း
သင်ကသင့်ရဲ့စာမေးပွဲများကိုပျက်ကွက် Keep အဘယ်ကြောင့်
သင်ထောက်ကူ 1: စာရေးဆရာရဲ့ Tone
အဆိုပါအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပင်မ Idea Find လုပ်နည်း
Namkaran - မည်သို့သင့်ရဲ့ကလေးအမည်ရန်
အင်္ဂလိပ် ဖော်ပြ. စိတ်ပျက်စရာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျပုံစံအကြောင်းကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ ESL သင်ခန်းစာအစီအစဉ်
ယင်းကြိယာ "Améliorer" Conjugate လုပ်နည်း (Improve မှ)
လက်ပံပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိ Butterfly: အဆိုပါ Karner အပြာရောင်
Is ကဘာလဲပိုက်ဆံပုံစံလုပ်ရန်မှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
ဘယ်လောက် Kilimanjaro တောင်တက်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်ပါသလား?
အများဆုံးလုံခြုံရေးဖက်ဒရယ်ထောင်မှ: ADX Supermax
ကိုယ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ Backup ကိုအလင်းများစုံစမ်းလုပ်နည်း
ဗားမောင့် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
အောင်မြင်သောမိဘ-ဆရာ Conferences ကများအတွက်လုပ်ရန်နှင့်မလုပ်ရန်
Crystal ကြီးထွားလာ: ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းပြဿနာများ